That's so good, right?: ငွေပေးရင် ဂေး ဖြစ်နိုင်သလား ဒါမှမဟုတ် လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ လိင်မှုကိစ္စ ဘာကွာခြားသလဲ
ငွေပေးရင် ဂေး ဖြစ်နိုင်သလား ဒါမှမဟုတ် လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ လိင်မှုကိစ္စ ဘာကွာခြားသလဲ
သက်တံ့အယ်ဒီတာအဖွဲ့။ October 29, 2010
ဒီစာလေး ရေးဖြစ်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာတဲ့ ကိစ္စတွေကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ခေတ်စားတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးကြောင့်ပါ။ အဲဒီ စကားလုံးကတော့ “As long as you pay. I am Gay” ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ငွေသာရမယ် ဆိုရင်တော့ ဂေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်ပါတယ်။
ဒီထက် ထဲထဲဝင်ဝင် စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ကန်တော့ပါရဲ့။ ရိုင်းသွားရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ ဖင်ချမယ် ဆိုရင်လဲ ခံပါ့မယ်။ လုပ်ပေးဆိုလည်း လုပ်ပေးမယ်။ ကြိုက်သလိုခိုင်း အကုန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းက ဒီလိုစပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ကောင်းမလေးတယောက်က ကျနော့်ကို ပြောလာပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမျိုးသား ပြည့်တန်ဆာတွေထဲမှာ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ယောက်ျားစစ်စစ်တွေလို့ ပြောတယ်။ အဲဒါ မှန်လားဆိုပြီး ကျနော့်ကို ပြောလာပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကျနော်ကလည်း သူ့ကို ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ မျက်ခုံးလေး ကြုံ့ပြီးမေးလိုက်မိတယ်။ ညဉ်းပြောချင်တဲ့ ယောက်ျားအစစ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘာကိုကြည့်ပြီး ယောက်ျားအစစ်လို့ ပြောတာလဲဆိုပြီး မေးလိုက်တော့ သူက ဇက်ကလေးပုဝင်သွားပြီး “စော်ကားသလို ဖြစ်သွားရင်လည်း ဆောရီးနော်။ ငါက မသိလို့မေးတာပါ။ ဟို ငါပြောချင်တာကလေ မိန်းကလေးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောက်ျားတွေကို ပြောချင်တာပါ။ သူတို့ကို ပိုက်ဆံပေးပြီးခေါ်တယ်ဆိုတော့ ခိုင်းတာအကုန်လုပ်ရတာပဲလား”။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်က ပြန်ထပ်မေးတယ်။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ သူက ပြန်ပြောတယ်။ “ဟိုလေ နင်တို့စကားလိုမျိုးဆိုရင် ကြိုမယ်ဆိုရင်လည်း ကြိုရမယ်။ ပို့မယ်ဆိုရင်လည်း ပို့ရမှာပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ပါးစပ်နဲ့ ဆက်ဆံဆိုရင်လည်း ဆက်ဆံရမှာပေါ့နော်”။ ကျနော်ကလည်း မျက်ခုံးတစ်ချက်ပင့်ပြီး နင်ပြောတဲ့ အရာတွေအားလုံးက တကယ့် ပရောဖက်ရှင်နယ်ဆန်တဲ့ ယောက်ျားပြည့်တန်ဆာတွေ ဆိုရင်တော့ ကာစတန်မာရဲ့ စိတ်တိုင်းကျ အကုန်လုပ်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုင်းမှာတော့ အပို့ခံတဲ့ လူတွေကတော့ အရမ်းနည်းပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်းမက ဆက်ပြီးတော့ အရစ်တက်ပြန်ပါတယ်။ “ဟင်း… ဖင်မှာ ဟိုလိုလုပ်ပေးလိုက်တော့ သူက ဂေး ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်”။ အင်း နင့်လိုပဲ မေးတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ။ နင်တို့ခေါ်တဲ့ ယောက်ျားစစ်စစ်ဆိုတဲ့ သူတယောက်က ဖင်ခံလိုက်ရင် ဂေး ဖြစ်သွားရောလား။ ဒါမှမဟုတ် မိန်းမကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က ဂေးတစ်ယောက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံလိုက်ရင် ဂေးဖြစ်သွားရောလား ဆိုတဲ့ဟာကို အမေရိကန်က ဂေးစုံတွဲတွေရဲ့ ပေါင်းဖော်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာ Joe Kort ဖြေထားတာကို ပြောပြမယ်ဆိုပြီး အောက်မှာကျနော်ကူးထားတဲ့ဟာလေးကို သူ့ကိုဖတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ကိန်းဂဏန်းတွေ အတိအကျ ကောက်ယူထားတာမျိုး မရှိပေမယ့်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ယောက်ျားပြည့်တန်ဆာ လုပ်စားနေတဲ့သူတွေ အတော်များများက လိင်ကွဲချင်းကိုသာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောက်ျားတွေချည်း ဖြစ်နေတာကတော့ မှန်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ တော်တော်များများက သူ့ကို ပြန်ပို့တာကို လက်မခံပါဘူး။ အိုကေ ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်း ခဏရပ်ထားပြီးတော့ ပညာရှင်ကြီး Joe Kort လေ့လာထားတာလေးကို တချက်ကြည့်ရအောင်။
သူ့ရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဂေးအပြာကားမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ သူတွေ အတော်များများက မိန်းမကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောက်ျားတွေသာ ဖြစ်ကြတယ် ဆိုတာကို အဲဒီ ဂေးအပြာကားတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ သွားရောက်လေ့လာပြီးတော့မှ သိရှိခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆိုတော့ လူတချို့က သူ့ကို မေးကြပါတယ်။ “တကယ်လို့ သူက မိန်းမကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဘာလို့ သူ့ရဲ့လိင်အင်္ဂါတွေက လိင်ဆက်ဆံဖို့အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နိုင်ရတာလဲ။ ဒါဆိုလို့ရှိရင် သူတို့ကို မိန်းမစိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောက်ျားစစ်စစ်တွေလို့ ပြောလို့ရနိုင်လား။” ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေ မေးကြသလို လူအတော်များများကို ဒွိဟဖြစ်စေတာက အဲဒီ ဂေးအပြာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ထုတ်ပြောလာတဲ့ စကားကိုယ်တိုင် အဲဒီလူတွေက မိန်းမကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားစစ်စစ်တွေပါလို့ ၀န်ခံထားပြန်တော့ ပိုပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီး သူ့ကို မေးထားကြတာ ရှိပါတယ်။
အဲဒီမှာ သူဖြေထားတာက အမျိုးသားတွေရဲ့ လိင်မှုကိစ္စဆိုတာ သူ့ကို ရင်ခုန်စေတယ် သာယာစေတယ် ကြည်နူးစေတယ် ဆိုတဲ့အရာနဲ့ သီသန့်စီ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ယောက်ျား အတော်များများရဲ့ လိင်မှုကိစ္စဆိုတာ လိင်စိတ်နိုးကြွလာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် အကုန်လုံးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံလို့ ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဟာပါပဲ။ အဓိက ကတော့ လိင်စိတ်နိုးကြွလာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ အချက်ပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီမှာ သူက ဥပမာ တစ်ခုပေးထားတာက ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ ယောက်ျားတွေ ယောက်ျားချင်း လိင်ဆက်ဆံကြတာ အဲဒီလို ဆက်ဆံလိုက်လို့ ဘယ်သူမှ ဂေးဖြစ်မသွားဘူး။ သူတို့ရဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှုကတော့ နဂိုအတိုင်းပဲ ရှိနေတာပါပဲ။ အဓိက ကတော့ လိင်ဆက်ဆံဖို့ကို ဖြစ်စေတဲ့ စိတ်ဆန္ဒ တစ်ခုပဲရှိပြီး အဲဒီ ယောက်ျားနဲ့ လိင်ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အတွက် သာယာကြည်နူးတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု အရသာကို ခံစားရတာမျိုးတော့ မရှိပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ လိင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူဆိုတာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အရာတွေလို့ ဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ ရှေးရိုးစွဲ အမြင်ထဲက လက်ခံထားသလိုမျိုး တစ်ယောက်က ယောက်ျားအချင်းချင်း လိင်ဆက်ဆံလိုက်ပြီဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂေးများဖြစ်နေပြီလားဆိုပြီး သံသယ၀င်နေတဲ့ ပုံစံမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ပြီး တခြားတစ်ခုက မိန်းမနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရတာကို အရမ်းနှစ်သက်တဲ့ ဂေးယောက်ျားတွေလည်း အများကြီးရှိနေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက် ဂေး ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို လက်ထပ်ထားတဲ့ ဂေး ယောက်ျားလေးတွေအကြားမှာ အဖြစ်များတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်အရ ဆိုလို့ရှိရင် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံရတာကို သူတို့တွေအနေနဲ့ ကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေးကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ချစ်တဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှုကတော့ ဘယ်တော့မှ ပြောင်းမသွားဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လိင်တူချစ်သူပါလို့ ၀န်ခံလိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ မိန်းမနဲ့ဆက်ပြီး လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ် မရှိတော့တဲ့သူတွေ များတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ Cathexis လို့ခေါ်တဲ့ လူတယောက်ရဲ့ လိင်စိတ်နိုးကြွမှု ချစ်ခင်ယုယမှုနဲ့ လိင်ယက်မက်တို့နှင့်သာ အများဆုံး သက်ဆိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သုတေသန ပြုချက်အရ အဲဒီလို လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ လိင်ကိစ္စတွေ နှစ်ခုကြားမှာ ဗျာများနေတဲ့ လူငယ်တွေ သူ့ဆေးခန်းကို လိုက်လာပြီဆိုရင် သူက ဒီလို မေးခွန်းတွေ မေးလိမ့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီမေးခွန်းကို သူက “ကမ်းခြေက ဥာဏ်စမ်း”လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ စမ်းသပ်နည်းက အဲဒီလူငယ်လေးတွေကို သူကမေးတယ်။ တကယ်လို့ မင်းတို့ကမ်းခြေမှာ လှဲနေတယ်ဆိုပါစို့။ မိန်းမကော ယောက်ျားပါ နှစ်မျိုးစလုံး ရေကူးဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ဖြတ်လျှောက်သွားကြတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုခံစားရလဲလို့။ အဲဒီမှာ မိန်းမကိုသာ ကြိုက်တဲ့ လူငယ်လေး ဖြစ်ပေမယ့် ယောက်ျားချင်း လိင်ဆက်ဆံမိလို့ ဗျာများပြီး ရောက်လာတဲ့ ကောင်လေးက အမျိုးသမီးတွေကိုပဲ ခံစားလို့ရတယ်။ သူ့ကို လိင်စိတ်ထကြွစေတယ်ဆိုပြီး ဖြေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Cathexis ဆိုတာ တခြားပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီခံစားချက်ကို ပြောတာပါ။ ဆိုတော့ ပိုရှင်းအောင် ပြောရမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲမှာ လူတယောက်ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကူးထဲမှာ သာယာနိုင်တဲ့ဟာကို ပြောတာပါ။ ဒါပေမယ့်လို့ မိန်းမကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားတွေ တခါတလေကျရင် တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်က လိင်စိတ်နိုးကြွလာအောင် လာလုပ်ပေးပြီဆိုရင် အဲဒီယောက်ျားနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖို့အတွက် သူလည်း လိင်စိတ်နိုးကြွလာနိုင်တာကို တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုက အဲဒီမိန်းမကြိုက်တဲ့ အမျိုးသားက သူ့ကို လိင်စိတ်နိုးကြွားလာအောင် လာလုပ်ပေးတဲ့ ယောက်ျားရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ် သာယာကြည်နူးနေတာမဟုတ်ပဲ လိင်ကိစ္စတစ်ခု သက်သက်ကြောင့်သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပြာရုပ်ရှင်လောကမှာ မိန်းမပဲကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားတွေ အများအပြား ပါဝင်သရုပ်ဆောင် နေကြတာဟာ အခုဏက ပြောခဲ့သလို တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်စိတ်နိုးကြွလာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် သရုပ်ဆောင်နိုင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆိုတော့ ပိုက်ဆံပေးရင် အဲဒါကို အထမြောက်အောင် လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောလို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။
ပညာရှင်ကြီး Kort ရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ သူတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ မိန်းမကိုပဲကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားပြည့်တန်ဆာတယောက် ပြောပြတာကတော့ အဲဒီလို ဗီဒီယိုထဲမှာ သရုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် သူနဲ့တွဲတဲ့သူရဲ့ နှိုးဆော်ပေးမှုက အဓိကဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဖြေဖူးပါတယ်။ ပြီးတော့ မိန်းမတွေနဲ့ ဆက်ဆံရင်လည်း တချို့မိန်းမတွေကို စအိုမှာ ဆက်ဆံပေးတာရှိသလို ယောက်ျားစအိုကိုလည်း ပြန်ဆက်ဆံပေးရတာ သူတို့အတွက် ဘာမှ အခက်ခဲ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအပြင် မိန်းမကိုပဲ ကြိုက်တဲ့ အမျိုးသား အတော်များများကလည်း သူတို့စအိုကို လိင်ဆက်ဆံပေးတာကို ကြိုက်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပမေယ့် သူတို့ရဲ့ စအိုကို လိင်ဆက်ဆံခံလိုက်ရလို့လည်း ဂေး ဖြစ်မသွားဘူးဆိုတာ အများအပြားတွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးသူပြောသွားတာကတော့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က စအိုမှာ လိင်ဆက်ဆံခံလိုက်ရလို့ ဂေး ဖြစ်မသွားဘူး ဆိုတာပါပဲ။
Posted by Alex Aung at 9:52 PM
Labels: News, ဆောင်းပါး
ငွေပေးရင် ဂေး ဖြစ်နိုင်သလား ဒါမှမဟုတ် လိင်စိတ်ခံယူ...
How I BecameaToilet Slave
အိမ်နီးနားချင်း (အပိုင်း ၂)